Ukuhanjiswa kwe-imeyile iBhlog
Ithegi: Ukuphicothwa kweBrand
Ukuzenzekelayo kweNtengiso ligama elinikwe amaqonga esoftware eyilelwe amasebe entengiso kunye nemibutho ukwenza lula iinkqubo ngokwenza imisebenzi ephindayo. Omnye wale misebenzi kukukwazi ukuchonga undwendwe kwindawo yakho, ukufaka ulwazi lwabo, kunye nokuphuhlisa isicwangciso sonxibelelwano esiqhubekayo kunye nabo… kufezekiswe ngezixhobo ezincinci okanye kungabikho zixhobo kusetyenziswa oomatshini abazihambelayo. Ngokweqela laseAberdeen, iinkampani ezihambisa iinkqubo zokuthengisa ezizenzekelayo: Yiba ne-107% engcono yokuguqula inqanaba. Unama-40%
Uphando olulula kunye nayiphi na iPlatform ye-imeyile
NgoLwesine, Aprili 14, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 Douglas Karr
Ndibona iinkampani ezininzi zisokola kuphando lwe-imeyile. Abanye ababoneleli be-imeyile bazamile ukungenisa iifom kwizicelo zabo, kuphela ukufumanisa ukuba uninzi lwabathengi be-imeyile (kwi-Intanethi nangaphandle) abayi kuyinika uvavanyo lwe-imeyile ngokufanelekileyo. Ngelishwa, i-imeyile ihlala iyilelwe kakuhle xa ilingana namandla omthengi we-imeyile. Kuba abathengi be-imeyile banika ithuba lokucofa kwikhonkco, eyona ndlela ilula yokufaka i-poll elula okanye uphando
Inkonzo ye-imeyile elula yeAmazon- SMTP kwilifu
NgoLwesibini, Februwari 1, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 UAdam Omncinci
Njengomsebenzisi weeNkonzo zeWebhu zeAmazon, ngamanye amaxesha ndifumana ii-imeyile kubo zibhengeza iinkonzo ezintsha okanye zindimema ukuba ndithathe inxaxheba kwi-beta okanye kwenye. Kwiveki ephelileyo ndifumene i-imeyile ebhengeza iAmazon Simple Email Service. IAmazon SES ikakhulu sisixhobo sabaphuhlisi. Ngokukodwa kwabo banqwenela ukwenza ezabo iinkqubo zokuhanjiswa kwe-imeyile / iinkqubo zokuthengisa ngokuchasene nokusebenzisa iqonga le-Email Service Provider's (ESP). Ngokusisiseko yi-SMTP efini.
Inguquko: Dibana nenjongo yoTyelelo lwakho
NgoMvulo, nge-31 kaJanuwari, 2011 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Ingabonakala njengombuzo ocacileyo, kodwa xa indawo yakho yenzelwe ukuphendula kwinjongo yoluhlobo ngalunye lwendwendwe onakho ukuguqula ngakumbi. Iindwendwe ziya kuza kwindawo yakho ngezizathu ezininzi: Ukufuna ulwazi-bobabini abathengi kunye namathemba anokukhangela iimpendulo ezithile. Ngaba banokuzifumana? Ukuba akunjalo, ngaba banokunxibelelana nawe ukuze bafumane iimpendulo? Fumanisa-amaxesha amaninzi iindwendwe ziya kuhlala emhlabeni
Yongeza imveliso ye-imeyile ngemowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi
NgoLwesibini, Januwari 25, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 UMichael Reynolds
Abantu abaninzi abandaziyo bayazi uthando lwam ne Inbox Zero. Okokuqala kwenziwa kuthandwa nguMerlin Mann, i-Inbox Zero yindlela yokulawula i-imeyile yakho kunye nokugcina ibhokisi yakho engenayo ingenanto. Yinkqubo enkulu yemveliso ye-imeyile. Ndizithathile iikhonsepthi, ndazikhupha zangaphezulu, kwaye ndongeze izinto ezimbalwa ezintsha. Ndikwafundisa iiseshoni zemfundo kwimveliso ye-imeyile rhoqo. Nangona ndingumlandeli omkhulu, ayinguye wonke umntu